वंगुर पालन विकासका लागि स्वास्थय व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने – Saurahaonline.com
वंगुर पालन विकासका लागि स्वास्थय व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने
चितवन, १७ भदौ । व्यवसायिक रुपमा वंगुर पालन विकासका लागि बंगुरको स्वास्थय व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले पोल्ट्री, माछा, र कृषिमा भन्दा वंगुर पालनमा बढी आम्दानी सकिने भएकोले यसको व्यवसायिक पालनमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव समेत दिएका छन् ।
चितवनको भरतपुरमा आयोजित वंगुर व्यवसाय सुधार कार्यक्रमको राष्ट्रिय अभियान अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रिय वंगुर कुखुरा प्रर्वद्धन कार्यक्रम ललिपुरका कार्यालय प्रमुख डा. जगदिश पाण्डेले सरकारले नै विग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत पकेट क्षेत्रका रुपमा विसित १५ जिल्लामा सरकारले अनुदान दिन लागेको जानकारी गराउदै यस तर्फ ध्यान दिन कृषकहरुलाई आग्रह गरे । उनले देशभरमा १४ सय बगुंर फर्महरुमा ३ लाख बढीले रोजगारी पाएको जानकारी दिए ।
उनले बंगुरको मासु अन्य मासुहरुको तुलनामा स्वास्थय भएको बताए । साथै छिटै नेपालको वंगुरको मासु विदेश निर्यात गर्न तयारी समेत भएको बताए ।
कार्यक्रममा १५ जिल्लाका १५ जना बढी वगुर विज्ञहरुको सहभागीता रहेका थियो । कार्यक्रमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख डा. रामकुमार कार्कीले चितवन समेत अनुदान दिने जिल्लाकाको रुपमा छनोट भएकाले चितवनका वंगुर पालन कृषिकहरुलाई सहभागी हुन अनुरोध गरे । कार्यक्रम केन्द्रिय वंगुर कुखुरा प्रर्वद्धन कार्यक्रम ललिपुरको आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो ।